November 2010 | TechSectors
Free Thinker ဆိုတဲ့ Blog ထဲက Environmental 02 ဆိုတဲ့ ပို့စ်တစ်ခုကို အင်တာနက်ထဲမှာ ပို့စ်အတွက် အသုံးလိုလောက်မယ့် ပုံလေးတွေ လိုက်ရှာရင်း ရောက်ခဲ့တယ် -
Environmental 02 ဟာ ဆရာ အော်ပီကျယ် ရေးထားတဲ့ ကာတွန်းတွေကို ပြန်ဖော်ပြထားတာပါ - ဆရာ အော်ပီကျယ်ကို ဆယ်တန်းတက်တည်းက သူ့ ကာတွန်းတွေနဲ့ ရင်းနှီးခဲ့တယ် - ကျွန်တော့် ဆရာ ဦးတင်မောင်ဦးက သူ့ရဲ့ ဓမ္မဓိဌာန် စာအုပ်တွေမှာ ဆရာအော်ပီကျယ်ရဲ့ ကာတွန်းလေးတွေ အမြဲ ထည့်တတ်တယ် - ဘောင်မခတ်ထားတဲ့ အတွေးတွေကို ကြိုက်တယ် - သူများမတွေးတဲ့ ရှု့ထောင့်က တွေးထားတဲ့ ဖော်ပြချက်တွေကို ချစ်တယ် - အဲလို အတွေးမျိုးက သဘာဝနဲ့ ဆန့်ကျင်တာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ် - ကိုယ့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘောင်မဝင်တဲ့ အတွေးမျိုးလည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်မယ် - အဆိုးဆုံးအခြေအနေ တစ်ခုမှာ လူတိုင်းက ကိုယ့်အတွေးကို လက်ညိှုးဝိုင်းထိုးတာလည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်မယ် -
အဲလို အတွေးတွေက လူတိုင်းအတွက် အကျိုးရှိချင်မှလည်း ရှိမယ် - မရှိချင်လည်း မရှိဘူး - အကျိုးရှိတယ် မရှိဘူးဆိုတာကလည်း ကိုယ့်ဘာသာ သတ်မှတ်လို့ မရဘူး - သူတို့တွေပဲ သတ်မှတ်ကြတာပဲ - အခု သူရေးထားတဲ့ အတွေးတွေကရော - လူတိုင်းအတွက် အကျိုးရှိနိုင်မလား ? တစ်ယောက်တည်း အတွက်လား ? အများစု အတွက်လား ? လူသားတိုင်း အတွက်လား ?
ဆရာ အော်ပီကျယ်ရေးထားတဲ့ ဒီ စကားတစ်ခွန်းကို အကြိုက်ဆုံးပဲ -
မျိုးဆက်တိုင်းမှာ ပစ္စုပ္ပန်ထက် ပိုကောင်းတဲ့ အနာဂတ်ကို ဖန်တီးဖို့ တာဝန်ရှိသတဲ့
တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ အင်တာနက်ထဲ စာလိုက်ဖတ်ရင် - ဟိုလူကြောင့် ဒီလူ့ကြောင့် - ဟိုလူမကောင်းလို့ ဒီလူမကောင်းလို့နဲ့ မြန်မာတွေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အချင်းချင်း လက်ညိှုးထိုးနေကြတာ နေ့တိုင်းတွေ့နေရတယ် - ဝါဒရေးရာဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် လက်ညိှုးထိုးနေယုံနဲ့ အဖြေထွက်တာမျိုး မဟုတ်ဘူး - ဒီလို တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် လက်ညိှုးထိုးရင်း ဖြတ်သန်းနေကြတာ ဘယ်နနှစ်လောက်တောင် ရှိပြီလဲ - ပြန်စဉ်းစား ကြစေချင်တယ် - စကားတွေ အများကြီး မပြောပါနဲ့ - ကိုယ့်ကိုကိုယ် မေးခွန်းတစ်ခုပဲ ပြန်မေးကြည့်ပါ -
ငါတို့ တကယ်ပဲ ပစ္စုပ္ပန်ထက် ပိုကောင်းတဲ့ အနာဂတ်ကို ဖန်တီးနေခဲ့ကြပြီလား ??
လောလောဆယ်တော့ အတွေးတစ်ခုကို မျှဝေခဲ့တဲ့ Free Thinker Blog က မျှဝေသူကို ကျေးဇူးတင်နေမိတယ် -
တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ အားလပ်တဲ့ အချိန်လေး အင်တာနက်ထဲဝင်ပြီး Websites တွေ ဖတ်ဖြစ်တဲ့ အခါ - ဟိုကြည့်ဒီကြည့် ကြည့်တဲ့ အခါ အမြဲတမ်းလိုလို နှေးကွေးလေးလံနေတဲ့ Connection နဲ့ နှစ်ပါးသွားနေရတယ်လို့များ ထင်နေပါသလား - ဒါမှမဟုတ် Browser ကနေ URL ရိုက်ပြီး သွားတဲ့ အချိန် သွားချင်တဲ့ နေရာရောက်ဖို့ တော်တော်ကြီး စောင့်နေရတယ်လို့များ ခံစားနေရပါသလား - ဒီလိုဖြစ်တာဟာ Connection မကောင်းတာ တစ်ခုတည်းကြောင့်လို့ တစ်ထစ်ချ သတ်မှတ်လို့ မရပါဘူး - ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ISP က ပေးထားတဲ့ DNS server ကို အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ DNS sever တွေထဲက တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုကို ပြောင်းသုံးတာခြင်း အားဖြင့်လည်း ပြေလည်စေနိုင်ပါတယ် -
Photo from tech.701panduan.com
Default ISP DNS များအား အကောင်းဆုံး DNS Servers များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပါ
ဘာကြောင့်မို့ Default DNS ကို တစ်ခြား အကောင်းဆုံးပါဆိုတဲ့ DNS Servers တွေဆီ ပြောင်းခိုင်းရပါသလဲ ?? ဘာကြောင့်လည်းဆို ကိုယ့် ISP က သုံးတဲ့ DNS server က နှေးရင် ကိုယ့် ကွန်ပြူတာရဲ့ Browser ကနေ URL တစ်ခုကို ခေါ်ယူတဲ့ အချိန်မှာ Website ကို ဆွဲယူတဲ့ Loading time ကလည်း ပိုပြီးကြာသွားတယ် - ဒီကြားထဲ နဂိုကမှ Connection ကမှ ခနော်နီ ခနော်နဲ့ ဆိုရင် Website တစ်ခုဝင်ရဖို့ အဆိုးတကာ့ အဆိုးဆုံး အခြေအနေကို ရောက်သွား တတ်ပါတယ် -
DNS server တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို အကြမ်းဖျဉ်းလောက် ပြောပြလို့ ရနိုင်မလား ??
DNS server တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ သဘောတရား တစ်ချို့တစ်ဝက်ကို ဒီနေရာမှာ ဖော်ပြထားခဲ့ဖူး ပါတယ် - လေ့လာ ကြည့်နိုင်ပါတယ် -
Windows မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ Default DNS ကနေ တစ်ခြား DNS server တွေကို Change ဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်ရမယ့် နည်းလမ်းက အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ IP addresses တွေကို LAN မှာဖြည့်သွင်းပေးဖို့ပါ - အောက်မှာတော့ နမူနာ တစ်ခု ပြထားပါတယ် - သွားရမယ့် နေရာက Network Connections > Local Area Connection မှာ Right Click ပေးပြီး > Properties ကို ဝင်ရမှာပါ -
ဥပမာ အနေနဲ့ : ကိုယ့်ကွန်ပြူတာက အထက်ဖော်ပြပါ နေရာမှာ ဖြည့်သွင်းထားတဲ့ default DNS server ကို အောက်မှာ ဖော်ပြ ထားတဲ့ DNS server တွေထဲက ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို ပြောင်းဖြည့်ပေးပြီး OK ပေးယုံပါပဲ - ( IP addresses တွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ် )
Surfing Speed အား မြှင့်တင်ပေးမည့် DNS Servers များ
Google DNS : လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်လာက်က Google လည်း DNS servers လောကထဲကို ဝင်ခဲ့ပါတယ် - အကြောင်းက Google users တွေအနေနဲ့ Websites တွေကို လည်ပတ် သွားလာရာမှာ လွယ်ကူလျင်မြန်စေဖို့ အတွက် Google DNS နဲ့ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ် - Google DNS ကို အသုံးပြုချင်သူများ Primary DNS မှာ IP address ကို 8.8.8.8 နဲ့ Secondary DNS မှာ 8.8.4.4 လို့ ထားရပါမယ် -
OpenDNS : နောက်တစ်မျိုးကတော့ OpenDNS ပါ - သူ့မှာ ကောင်းတဲ့ တစ်ချက်က သူ့ကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အင်တာနက်ထဲက အန္တရာယ်ရှိတဲ့ Websites တွေ - နောက် ကိုယ့်အိမ်က အရွယ်မရောက်သေးသူ ကလေးသူငယ်တွေ ကြည့်ရှုဖို့ မသင့်တော်တဲ့ Adult sites တွေ အင်တာနက်ထဲ Surf လုပ်တဲ့ အချိန်ကြည့်ရှုလို့ မရအောင် သူက ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ် - ဒီအကြောင်းကိုပဲ +18 Adult sites များ Block ရအောင် ဆိုပြီး ကျွန်တော် ဖိုရမ်မှာ ဖော်ပြခဲ့ဖူး ပါတယ် - အထူးသဖြင့်တော့ ကျောင်းသုံး - ရုံးသုံး အင်တာနက် ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ကွန်ပြူတာတွေ အတွက် အထူးသင့်တော်တဲ့ DNS server ပါ - အသုံးပြုချင်သူများ Primary DNS မှာ IP address ကို 208.67.222.222 နဲ့ Secondary DNS မှာ 208.67.220.220 လို့ ထားရပါမယ် -
Advantage DNS : Advantage DNS ကလည်း UltraDNS Directory Services Platform ကိုသုံးပြီး တောင်းဆိုသမျှ DNS requests တွေကို အလျင်မြန်ဆုံး ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းပေးပါတယ် - အသုံးပြုချင်သူများ Primary DNS မှာ IP address ကို 156.154.70.1 နဲ့ Secondary DNS မှာ 156.154.71.1 လို့ ထားရပါမယ် -
ScrubIT : နောက်ဆုံး ရွေးချယ်ဖို့ ကျန်တာကတော့ ScrubIT ပါ - သူကလည်း အန္တရာယ် ရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Websites တွေကို access လုပ်လို့ မရအောင် တားဆီးပေးပါတယ် - အသုံးပြုချင်သူများ Primary DNS မှာ IP address ကို 67.138.54.100 နဲ့ Secondary DNS မှာ 207.225.209.66 လို့ ထားရပါမယ် -
စမ်းသပ်ကြည့်ပါ - ထူးခြားချက်လေးတွေ နောက်ထပ် ကောင်းတာလေးတွေရှိရင်လည်း မိသားစုဝင်ချင်းချင်း လက်တို့လိုက်ကြ ပါဦး -
ကျွန်တော်တို့ တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ အင်တာနက်ထဲ သွားလာလည်ပတ်နေတဲ့ Web pages တွေကို HTML ( HyperText Markup Language ) လို့ ခေါ်တဲ့ Programming language နဲ့ ရေးသားထားပါတယ် - ဒီ HTML လို့ ခေါ်တဲ့ Programming language ဟာ Web စာမျက်နှာမှာ ပါဝင်တဲ့ အချက်အလက် အကြောင်းအရာတွေကို ဘယ်လို ပုံစံချပြီး ဖော်ပြမယ်ဆိုတာ Browsers ကို ညွှန်ကြားတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာကို လုပ်ဆောင်ပါတယ် - နောက်တစ်မျိုး ပြောရမယ်ဆိုရင် HTML ကို Web ရဲ့ အခြေခံ အဆောက်အအုံ လို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ် - ဟိုးတစ်ချိန်တုန်းက ဒီ HTML ဆိုတဲ့ အခြေခံ အဆောက်အအုံဟာ ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေ သိပ်မရှိလှပါဘူး - အားလုံး ခပ်ရိုးရိုးတွေနဲ့ချည်း တန်ဆာဆင်ထားတာပါ - ဥပမာ - စာသားတွေကို ဘယ်လို ဖော်ပြမယ် - Links တွေ ဘယ်လိုချိတ်ဆက်မယ် - ပုံတွေ ဘယ်လိုဖြည့်သွင်းမယ် - အဲ့လောက်ပဲ ရှိခဲ့ပါသေးတယ် -
ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အဆင့်လိုက် တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ အတူ Web pages တွေမှာ နောက်ထပ် ပြောင်းလဲလာတာ တစ်ခုက ခံစားမှုတွေ အသက်ဝင်နိုင်စေမယ့် တန်ဆာဆင်မှု အပိုင်းပါ - ဒါကို စာစကားနဲ့ ပြောရင် CSS (Cascading Style Sheets) ကို အသုံးချတယ်လို့ ခေါ်ပါတယ် - CSS က ကျွန်တော်တို့ နေ့တိုင်းကြည့်နေတဲ့ Web pages တွေကို အများသူငါ ကြည့်ရှုတဲ့ အချိန်မှာ ရင်သတ်ရှုမောဖြစ်အောင် ဘယ်လို ပုံစံချမလဲ - အလှအပတွေ ဘယ်လိုပေါင်းစပ် ဖန်တီးမလဲ ဆိုတာ programmers တွေကို အလွယ်တကူ လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါတယ် -
ဒီအကြောင်းအရာက Web Design ပိုင်းကို အားသန်ကြတဲ့ လေ့လာလိုသူ လူငယ်တွေ ဗဟုသုတဖြစ်အောင် ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲက ပြန်လည်ဖော်ပြပေးတာပါ - လူငယ်တော်တော်များများ Web Design ပိုင်းကို အားသန်ကြတယ် - ဒါပေမယ့် တော်တော်များများက ဘာကိုစပြီး လေ့လာရမှန်း မသိဘူး - တစ်ချို့က သူများ Programming ဆိုတာနဲ့ လိုက် Programming ကြတယ် - သူများ Java ဆိုရင် ကိုယ်လည်းလိုက် Java ကြတယ် - ဒါပေမယ့် ကိုယ်သင်နေတာတွေက ဘယ်နေရာမှာ ဘာအသုံးဝင်မှန်းကျတော့ သေသေချာချာ ဂဃနဏ မလေ့လာကြဘူး - ဒါကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူငယ်တွေ အားနည်းချက်ပါပဲ - ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ အရာကို ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် တတ်ကျွမ်းဖို့ဆိုရင် ကိုယ်လေ့လာတဲ့ အရာက ဘာလုပ်လို့ ရမယ် ဆိုတာရယ် - အဲလိုဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ ဘာတွေမဖြစ်မနေ တတ်ဖို့လိုမယ် ဆိုတာရယ် တိတိကျကျ သိထားဖို့ လိုကိုလိုပါတယ် - ကျွန်တော်ကတော့ Web programmer လည်း မဟုတ်ဘူး - ကိုယ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ နယ်ပယ် မဟုတ်တော့ အများကြီးလည်း သိပ်မသိဘူး - ဒါပေမယ့် ရံဖန်ရံခါ စိတ်ရူးပေါက်ရင် ဟိုလိုက်စမ်း ဒီလိုက်စမ်း စမ်းတယ် - Blog လည်း ရေးတာရှိတော့ HTML - CSS က အခြေခံလောက်တော့ သိထားသင့်တယ် ဆိုပြီး နိုင်သလောက်လေး လေ့လာဖြစ်တာတော့ ရှိတယ် - ဒီလိုသိထားတော့ ကိုယ့် Blog လေး အမြင်လှအောင် ဟိုပြင်ဒီပြင် ပြင်တဲ့ အခါ - ဟိုပေါင်းဒီပေါင်း ပေါင်းတဲ့ အခါ - ဟိုဖြုတ်ဒီတပ် လုပ်တဲ့ အခါ ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့ -
အခုလည်း အဲလိုနဲ့ စာလိုက်ဖတ်ရင်း ဟိုတစ်နေ့က Online html editors နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ tools တွေ သွားတွေ့မိတယ် - အရင်သုံးနေကျ html editors တွေထက် ဒီကောင်က realtime previews မို့လို့ ကျွန်တော်ကတော့ ပိုသဘောကျမိတယ် - လေ့လာလိုသူတွေ သိရှိနိုင်အောင် ဒီအောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် - သူတို့တွေကတော့ -
သူက အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ Realtime HTML editor ဆိုတာပါ - HTML ကို လေ့လာလိုသူတွေ web developer တွေအတွက် အသုံးတည့်ပါတယ် - Web page တစ်ခုလုံး ဖြစ်ဖြစ် - Code လေးနည်းနည်းပါပါး ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ရိုက် Edit လုပ်ပြီး ထွက်လာမယ့် Result ကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်လို့ ရပါတယ် -
သူကလည်း အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ HTML editor တစ်မျိုးပါပဲ - နောက်ပြီး သူ့မှာ WYSWYG editor ပါလို့ Format လုပ်တဲ့ နေရာမှာ အလွယ်တကူနဲ့ ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်နိုင်ပါတယ် -
သူကတော့ HTML editor ထဲမှာ တော်တော်လေး အမြင်ရိုးတယ် ဆိုရမယ် - ဒါပေမယ့် အထင်မသေးပါနဲ့ Stylesheets နဲ့ CSS tags အားလုံးကို Supports ပေးပါတယ်။ နောက်ပြီး သူ့ကို Mobile browser ကနေလည်း သုံးလို့ ရပါတယ် -
ကျွန်တော်ခု ဖော်ပြခဲ့တာတွေ အားလုံးဟာ အခြေခံတွေပါ - စိတ်ပါဝင်စားသူများ အစပျိုးနိုင်အောင် - လေ့လာနေသူတွေ အထောက်အကူ ဖြစ်အောင် တွန်းအားပေးချင်ယုံသက်သက်ပါပဲ -
မိသားစုဝင်များ ဆထက်တန်ပိုး အောင်မြင်ကြပြီး အနာဂတ်မှာ မိမိတိုင်းပြည်ကို ဒီ့ထက်မက အကျိုးပြုနိုင်ကြပါစေ -